Akụkọ - Hebei juren na -ebuli akụrụngwa na ụzọ mmezi oge opupu ihe ubi na ọkọchị
Ọ dị mma izute gị ndị enyi m niile!
Ngwa na -ebuli elu na -aga izute oke mmiri ozuzo na -agba agba, oke ọkụ nke oge ọkọchị. Yabụ na anyị kwesịkwara ịkpachara anya iji ghọta ụfọdụ usoro mmezi akụrụngwa n'èzí.
Igwe mkpuchi, ihe mkpuchi, kranụ na akụrụngwa ndị ọzọ na -eme ka anwụ na -achasi ike, ebe a na -ewu ngwa ọrụ ndị a na -adịkarị na “oke ọkụ”. Ọrụ igwe na -arụkarị, nke metụtara ọganiru owuwu yana okwu nchekwa. Mgbochi idei mmiri n'oge oke ide mmiri bụkwa ebe ọrụ dị mkpa.
N'iburu ihe ndị a n'uche, ọkwa ahụ chọrọ mgbidi ebe a na -ewu ihe, ebe obibi ndị ọrụ na -akwaga mba ọzọ, nkwado olulu miri emi na ebe owuwu ihe ndị ọzọ ka ha nwee usoro nkwalite kwekọrọ ekwekọ, mgbachi, igwe na -ebuli elu na akụrụngwa iji nwee ngwaọrụ nchebe ọkụ, ikuku ajọ ifufe iji kwụsị ụlọ. .
Aghọtara na ngalaba ndị na -ewu ihe ugbu a nwere ndị na -ahụ maka igwe pụrụ iche, kwa ụtụtụ na mgbede maka idozi igwe mgbe niile. N'ihi oke okpomọkụ, ndị mmadụ na akụrụngwa nọ n'ọnọdụ ọrụ pụrụ iche, nchekwa na imepụta abụghị oge izu ike, iji oge ezumike nke ndị ọrụ maka nchekwa ọzụzụ mmepụta abụghị oge, bụ ọtụtụ ihe owuwu. saịtị chọrọ oru ngo.
Mgbe ị na -eji, toaa ntị ka ị mata voltaji na oge ọrụ igwe. N'oge ọkọchị, ọ bụrụ na igwe nwere ike zuru ike nke ọma, ọ kacha mma iji ya,
Ekwenyere na ọ bụrụhaala na itinye ntuziaka mmezi akụrụngwa, a ga -agbatị ndụ ndụ nke ibuli akụrụngwa.
Hebei Juren Lifting Machinery Co., Ltd. Ọpụrụiche na nrụpụta ọkụ eletriki, eriri eriri aka, ihe mkpuchi aka, CD1 eriri eriri eletriki, PA mini eletriki eriri eletriki, gwongworo hydraulic pallet, 12V winch electric, jack jack na ihe ndị ọzọ. , ịdị mma a pụrụ ịdabere na ya, mwepu ego, bụ ngwaahịa ntụkwasị obi nke ndị na -azụ ahịa.
Kpọtụrụ: Wendy wechat: vinjing688 whatsApp: +8619833962905
Bannon Electric Hoist, Lever Puller, Jet 1.5 Ton Chain ndoli, Ntuziaka Lever Chain ndoli, Igwe ọkụ eletrik eletrik, Micro Electric eriri eriri,